PSJTV | नेपालका ऐतिहासिक दस्तावेज नै गायब, सुगौली सन्धिको सक्कली प्रति कहाँ छ?
नेपालका ऐतिहासिक दस्तावेज नै गायब, सुगौली सन्धिको सक्कली प्रति कहाँ छ?
बुधबार, २२ साउन २०७६ पिएसजे न्युज
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सन्धिसम्झौताका सक्कली प्रति नेपालका सरकारी पुस्तकालयमा नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। सुगौली सन्धि र नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिका विषयमा सरकारले अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेजका विषयमा समितिले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग जानकारी लिएको थियो।
समितिमा मन्त्रीले पनि महत्वपूर्ण दस्तावेजबारे स्पष्ट जबाफ दिन सकेनन्। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छाड्दा त्यहाँबाट सबै दस्ताबेज आउन नसकेको शंका गरे। मन्त्री ज्ञवालीले यी सन्धिसम्झौताका विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए।
‘सुगौली सन्धि, १९५० र १९६५ को सम्झौताका हामीसँग भएको प्रति सक्कली हैन भन्ने प्रश्न आइरहेका छन्। यस विषयमा पहिला हामीसँग भएका दस्तावेज अध्ययन गर्नुपर्छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामीले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासबाट त्यहाँको लाइब्रेरीमा भएको नेपालसँग जोडिएका महत्त् वपूर्ण सामग्री खोज्न भनेका छौं र कोलकाताको पुस्तकालयमा पनि त्यस्ता दस्तावेज छन् भने खोज्न भनेका छौं।’
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर भएका सन्धिसम्झौताका सक्कली प्रति कानुन मन्त्रालयसँग भएको मन्त्री ज्ञवालीको दाबी छ। ‘नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि–अभिसन्धिको आधिकारिक प्रतिलिपि कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार कानुन मन्त्रालयसँग छ’, उनले भने, ‘यसको प्रतिलिपि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छ। पछिल्लो दस्तावेजहरूको प्रतिलिपि हामीसँग छ।’
दरबारबाट आएनन् कतिपय दस्तावेज
राजतन्त्र अन्त्यअघि शासन नारायणहिटी दरबारमा थियो। ०६२–०६३ को जनआन्दोलनले राजसंस्था अत्य गर्‍यो। त्यसपछि दरबारको अधिकार सिंहदरबारमा आयो। नारायणहिटीका महत्त् वपूर्ण दस्तावेज पनि सिंहदरबार लगिए।
तर कतिपय महत्त् वपूर्ण सन्धिसम्झौता तथा दस्तावेज सिंहदरबारसम्म आइनपुगेको पनि चर्चा हुने गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ। ‘त्यसबेला सबै महत्त् वपूर्ण दस्तावेज दरबारमा थिए। ती सबै यता आए कि आएनन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सबै हस्तान्तरण भएन भन्ने सुनेका छौं। ती दस्तावेज पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगै गयो कि दरबारमै बाँकी छन् या अन्य कुनै तरिकाले नष्ट भयो? यकिन छैन।’ मन्त्रालयसँग भएको दस्तावेजलाई डिजिटलाइज गरिरहेको जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको ओर्लंदो ओज
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्ने खतरा बढ्यो
पशुपतिनाथबाट अभियान सुरु : हात मिलाए रोग, नमस्कार गरे मनको योग
काठमाडौंमा केटीले काटिदिइन् केटाको लिंग, अनुसन्धान गर्दै प्रहरी
16th Feb 2020 पिएसजे न्युज
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी नै मुलुक विकास र समृद्धितर्फ अघि बढेको दाबी गरेका छन् । सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको अवसरमा शनिबार संसद्समक्ष कामको फेहरिस्तसहित करिब डेढ ...
सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने संकेत गरेको छ। कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले त्यसको संकेत गरे। ‘राजपाका लागि सरकारमा आउने मूल ढोका खुला छ, स्वागत गर्न ...